Matongerwo eNyika, 01 Kukadzi 2018
China 1 Kukadzi 2018
Kukadzi 01, 2018
Amai Mujuru Vanorohwa neVanofungidzirwa Kuti Vatsigiri veZanu-PF
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People’s Party Amai Joyce Mujuru nemusi weChina vakarohwa kuGlen Norah, Harare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF apo vaifamba vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino.
VaMugabe Vanosangana naAmai Mujuru Vachidemba Kutorerwa Masimba neMauto
Vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanonzi nemusi weChipiri vakadaidza vaimbova mutevedzeri wavo Amai Joyce Mujuru kumba kwavo kuBlue Roof kuBorrowdale Harare vakakurukura nyaya dzakawanda kusanganisa kubviswa kwaVaMugabe pachigaro nemauto uye kudzinga kwavakaita Amai Mujuru basa.
VaMudzuri Vanoti Mabasa Ndiwo Chete Anobvisa Vanotengesa Mumigwagwa
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC, Engineer Elias Mudzuri, vashora kanzuru yeHarare, mapurisa eZimbabwe Republic Police, ZRP, pamwe nemasoja nekusabata zvakanaka kwavanonzi vari kuita vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa.
Kanzuru yeBulawayo Yokurudzirwa Kushandisa Mukana Wekuve Special Economic Zone
Vagari vemuBulawayo vati kanzuru yeguta ravo inofanirwa kushandisa mukana wekunzi rakadomwa kuve Special Economic Zone kuti ikwezve vemabhizimisi pamwe nekumutsurudza makambani.
VaMnangagwa Vanoti Vakatambirwa Zvakanaka neNyika dzeKunze
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weChitatu vakaita musangano webato ravo wePolitburo muHarare mushure mekudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia.
Justice Chigumba Vanodomwa Kuva Sachigaro Mutsva weZEC
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vadoma mutongi wedare redzimhosva repamusoro, Justice Priscilla Chigumba, kuve sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission.
Vanogara muHopley Vobatsirwa Kuwana Zvitupa neERC
Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombekombe kweguta reHarare vaenda kunoedza kunyoresa nehuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vanhu ava vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti.
Mifananidzo Kubva kuCapitol Hill muAmerica VaTrump Vachitaura paState of The Union Address
Mifananidzo kubva kuCapitol Hill muAmerica pakuturwa kwemamiriro akaita zvinhu muAmerica, State of The Union Address
VaTrump Voparura Hurongwa hweMamiriro Akaita Zvinhu muAmerica
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump nhasi vaparura hurongwa hwemamiriro akaita nyika yeAmerica kana kuti State of the Union Address.
Vatori veNhau Vonyunyuta neKwavanoti kuMbunyikidzwa neZanu PF
Masangano evatori venhau anoti haasi kufara nemashoko akataurwa naAmai Hungwe svondo rapera apo vakaudza vatori venhau kuti vasaburitse zvavakanga vataura.
Ndira 30, 2018
EU Yobatsira Kusimudzira Zvirongwa Zvinobata Nyaya dzeMitemo Munyika
Sangano reEuropean Union rapa mari inodarika mamiriyoni matatu emadhora kuti ishandiswe munyaya dzinobata mitemo.